» मंगलापुरमा जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र शिलन्यास
४ चैत, तिलोत्तमा । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं. ९ मंगलापुरमा जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र निर्माण हुने भएको छ । केन्द्रको सोमबार आयोजित एक समारोहबीच तिलोत्तमा नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरे र उप–प्रमुख जागेश्वरी चौधरीले शिलन्यास गर्नुभयो ।
बुटवल–बेलहिया सिक्सलेन सडकसँग जोडिएको झण्डै १४ कठ्ठा क्षेत्रफलमा जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रसँगै आकर्षक बाल उद्यान समेत निर्माण गरिने वडाध्यक्ष नारायण न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । केन्द्रसँगै सोमबार अपाङ्गतामैत्री अत्याधुनिक सार्वजनिक शौचालयको पनि शिलन्यास गरिएको छ ।
झण्डै एक करोडको लागतमा जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रको भवनलगायतका पूर्वाधार निर्माण हुने वडाध्यक्ष न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । एक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको केन्द्रमा जेष्ठ नागरिकमैत्री खेलकुद, पुस्तकालय, संगीतालय, पार्क निर्माण गरिनेछ । निर्माण हुन थालेको केन्द्र नजिकैं ऐतिहासिक रामजानकी मन्दिर छ ।
तीव्र सहरीकरणसँगै युवापुस्ता कामकाजी भैरहँदा जेष्ठ नागरिकलाई आनन्ददायी तरिकाले समय बिताउन सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रको अवधारणा ल्याइएको हो । केन्द्रको शिलन्यास गर्दै नगर प्रमुख घिमिरेले जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रलाई नमूना बनाइने बताउनुभयो । जेष्ठ नागरिकका अनुभव, ज्ञान र सीपलाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न पनि मिलन केन्द्र उपयोगी हुने उहाँको भनाइ छ ।
जेष्ठ नागरिकलाई आनन्दमय तरिकाले चिन्तन÷मनन गर्न सक्ने गरी केन्द्रमा संरचनाहरु निर्माण गरिने जानकारी उहाँले दिनुभयो । कार्यक्रममा समाजसेवी तथा पुर्वसांसद बाबुराम राना, वडाअध्यक्ष नारायण न्यौपाने, सम्झना परिवार क्लवका अध्यक्ष खेमेन्द्र रानालगायतले जेष्ठ नागरिक केन्द्र निर्माण र स्थानीयको भूमिकाको सन्दर्भमा प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
मंगलापुरमा तिलोत्तमा नगरभित्रको दोस्रो जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र निर्माण हुन थालेको हो । वडा नं. ४ डिङ्गरनगरमा पनि जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र सञ्चालनमा रहेको छ । नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ ।